Ogaden News Agency (ONA) – Wasaarada Gaashaandhiga Soomaaliya oo La Weeraray.
Wasaarada Gaashaandhiga Soomaaliya oo La Weeraray.
Faah faahin dheeraad ah ayaa ka soo baxaysa weerar lagu qaaday xarunta Wasaarada Gaashaandhiga Soomaaliya ee Magaalada Muqdisho, waxaana iska hor’imaad ku dhawaad Saacad socday uu dhaxmaray ciidamada difaaca hore ee Wasaarada iyo kooxaha weerarka soo qaaday.
Dadka deegaanka ayaa sheegay in kooxaha Weerarka ku qaaday Wasaaradda aysan u dhawaan balse ay is qabteen ciidamada ilaalada Wasaarada oo xaafadaha dhexdooda difaac kaga jiray.
Iska hor’imaadkan ayaa sidoo kale waxaa ku biiray ciidamo kale oo ka baxay Wasaarada taas oo keentay in dagaalku uu sii xoogaysto. Majiro ilaa iyo hada wax war ah oo ka soo baxay Wasaarada Gaashaandhiga Soomaaliya, kaasi oo ku aadan weerarka lala beegsaday.
Magaalada Muqdisho ayaa mudooyinkii dambe waxaa ka dhacayay weerar toos ah oo lagu qaadayo xarumaha ay maamusho dowlada Federaalka Soomaaliya sida wasaaradaha, saldhig yada Booliiska iyo goobo kale oo muhiim ah.